စစ်အာဏာသိမ်းခြင်းကို တုံ့ပြန်ဖို့ ခေါင်းထောင်ထလာတဲ့ ဆူဒန် တော်လှန်ရေ
ဆူဒန်နိုင်ငံရဲ့ အကူးအပြောင်းကာလ အစိုးရကို စစ်အာဏာသိမ်းပြီး ဖြုတ်ချလိုက်ပြီ။ ခြိမ်းခြောက်ခံနေရတာ ကြာပြီဖြစ်တဲ့ ဒီအာဏာသိမ်းမှုဟာ ၂၀၁၉ လူထုအုံကြွမှု ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ တန်ပြန်တော်လှန်ရေး အင်အားစုတွေကြား ရင်ကြားစေ့ဖို့ ကြိုးပမ်းခဲ့ခြင်းကြောင့် မလွှဲမရှောင် ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တဲ့ အကျိုးဆက်ဖြစ်တယ်။ ဒေါသပုန်ထနေတဲ့ လူထုက လမ်းမတွေပေါ် အလုံးအရင်းနဲ့ ပြန်တက်လာခဲ့တယ်။ ဆူဒန်တော်လှန်ရေး အင်အားတွေ ခြေကုန်လက်ပန်းကျမသွားသေးကြောင်း ပြလိုက်တဲ့သဘောပဲ။ ဖောက်ပြန်ရေးသမား စစ်ခေါင်းဆောင်တွေကို အပြီးတိုင် အလဲထိုးပစ်ဖို့ အခုချိန်မှာ တရစပ် တိုက်ပွဲဝင်ကြရမယ်။
(ဒီလိုတွေ ဖြစ်လာဦးမယ်လို့ သုံးသပ်ခန့်မှန်းထားခဲ့တဲ့ ၂၀၁၉ တုန်းက ဆောင်းပါးကို ဒီကနေ ဝင်ဖတ်ကြည့်ပါ။
အောက်တိုဘာ ၂၅ ရက်နေ့ မနက်ခင်းစောစောမှာ ဗိုလ်ချုပ် Abdel Fattah al-Burhan ခေါင်းဆောင်တဲ့ စစ်တပ် အဖွဲ့ဝင်တွေက လစ်ဘရယ် ဝန်ကြီးချုပ် Abdalla Hamdok နဲ့ သူ့ဇနီးကို နေအိမ်ကနေ ပြန်ပေးဆွဲသွားခဲ့တယ်။ တခြားနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင် အတော်များများကိုလည်း ဖမ်းဆီးထားတယ်။ အစိုးရပိုင် တီဗွီ ကွန်ယက် သတင်း ဒါရိုက်တာကိုလည်း ဖမ်းထားခဲ့တယ်။ ဆူဒန်နိုင်ငံရဲ့ လေကြောင်း ခရီးစဉ်တွေအားလုံး ရပ်ဆိုင်းပစ်လိုက်တယ်။ အင်တာနက်လိုင်းတွေ ဖြတ်တောက်ပစ်ခဲ့တယ်။ ဒီနောက် Burhan က တီဗွီကနေ အရေးပေါ် အခြေအနေ ကြေညာပြီး ပြည်သူလူထုကို မိန့်ခွန်းပြောခဲ့တယ်၊ ၂၀၂၃ ဇူလိုင်မှာ ရွေးကောက်ပွဲ အသစ်တွေ ကျင်းပချိန်အထိ စစ်အုပ်ချုပ်ရေး ကျင့်သုံးသွားမယ်လို့ ပြောခဲ့တယ်။
Hamdok အဖမ်းခံရတယ်ဆိုတာနဲ့ ဆူဒန် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်များ အသင်း (SPA ဆိုတာ ၂၀၁၈-၁၉ တော်လှန်ရေး ကာလရဲ့ ခေါင်းဆောင်အဖွဲ့အစည်း) က ထုတ်ပြန်ချက်တစောင် ချက်ချင်းထုတ်လိုက်တယ်၊ “ဆူဒန်လူထု၊ တော်လှန်ရေး အင်အားစုတွေနဲ့ ကျေးလက် မြို့ပြအားလုံးက ရပ်ကွက်အသီးသီးမှာရှိတဲ့ ခုခံကာကွယ်ရေး ကော်မတီတွေအားလုံး လမ်းမကြီးတွေပေါ်ထွက်တိုက်ဖို့၊ လမ်းမကြီးတွေကို အပြီးတိုင် သိမ်းပိုက်ဖို့” ဆော်ဩလိုက်တယ်။ ကွန်မြူနစ်ပါတီကလည်း စစ်အာဏာသိမ်းခြင်းကို တွန်းလှန်ဖယ်ရှားပစ်ဖို့ သပိတ်တိုက်ပွဲ ခေါ်သံပေးလိုက်တယ်။
လူထုဆီက တုံ့ပြန်မှုကလည်း ချက်ချင်းပဲ။ ထောင်ပေါင်းများစွာသော ဆန္ဒပြ လူတန်းကြီးတွေဟာ Khartoum (ဆူဒန်ရဲ့ မြို့တော်) က စစ်ရုံးချုပ်တွေဆီ ချီတက်ခဲ့ကြတယ်၊ ဆန္ဒပြသူတွေထဲမှာ အမျိုးသားတွေ၊ အမျိုးသမီးတွေ၊ လူကြီးတွေ၊ ကလေးတွေ အစုံပဲ၊ အားလုံးက အလံတွေ ဝှေ့ရမ်းပြီး ကြွေးကြော်ချီတက်သွားကြတယ်၊ ဆန္ဒပြသူ တော်တော်များများရဲ့ လက်ထဲမှာ တုတ်တွေ၊ ကာကွယ်ရေး ပစ္စည်းကိရိယာတွေနဲ့ တခြား အသုံးများတဲ့ ပစ္စည်းတွေ ဆွဲကိုင်ထားကြတယ်။ မြို့တော်တဝှမ်း ဆန္ဒပြပွဲတွေ လူတသန်းကျော် ပါဝင်ခဲ့တယ်လို့ ဖော်ပြကြတယ်။ လမ်းမကြီးတွေနဲ့ တံတားတွေ ပိတ်ဆို့ပစ်ဖို့ လူထုကိုယ်တိုင် ဘယ်ရီဂိတ်တွေ ဆောက်လိုက်ကြတယ်။ အကြမ်းဖက် ဖြိုခွဲရေး တပ်ဖွဲ့တွေကို ဟန့်တားဖို့ရာ တာယာတွေကို မီးရှို့ပစ်ကြတယ်။
အလုပ်သမား အဖွဲ့တွေ၊ Khartoum တက္ကသိုလ် ပါမောက္ခ သမဂ္ဂနဲ့ ဆူဒန် လေယာဉ်မှူး သမဂ္ဂ အမှုဆောင် ကော်မတီလို ပရော်ဖက်ရှင်နယ် အဖွဲ့အစည်းတွေက သူတို့အဖွဲ့ဝင်တွေကို လမ်းမပေါ်က တိုက်ပွဲတွေမှာ ပါဝင်ကြဖို့ ဆော်ဩကြတယ်။ လေယာဉ်မှူး သမဂ္ဂ အမှုဆောင်ကော်မတီဆိုရင် “အထွေထွေ သပိတ်မှောက်ပြီး စစ်အာဏာဖီဆန်ကြောင်း” ကြေညာခဲ့တယ်၊ “လေကြောင်းလုပ်ငန်းမှာရှိကြတဲ့ အလုပ်သမားတွေ၊ လေယာဉ်မှူးတွေအားလုံး လမ်းမပေါ်ထွက်ပြီး ဆူဒန် လူထု တော်လှန်ရေးကို ကာကွယ်ကြဖို့”လည်း နှိုးဆော်ခဲ့တယ်။ ဒီလူထုတိုက်ပွဲကို တန်ပြန်တဲ့အနေနဲ့ Burhan က ဆူဒန် အလုပ်သမား သမဂ္ဂများ စီမံခန့်ခွဲရေး ကော်မတီတွေကို ဖျက်သိမ်းပစ်လိုက်တယ်။
အမြဲတမ်း စစ်တပ်နဲ့ ကြောက်မက်ဖွယ် Janjaweed Rapid Support Forces (RSF) လူမျိုးစု လက်ရုံးတပ်တွေ နှစ်မျိုးလုံး ပါဝင်တယ်လို့ ယူဆရတဲ့ လက်နက်ကိုင်တပ်တွေ ဆန္ဒပြလူထုကို ဖြိုခွဲဖို့ သွားခဲ့တယ်။ ပစ်ခတ်ဖြိုခွဲခံရပေမယ့် လူထုက ကြောက်မသွားဘူး၊ အင်မတန်ကြီးမားတဲ့ ရဲစွမ်းသတ္တိနဲ့ ရင်ဆိုင်ကြတယ်။ အခုချိန်ထိ သိရသမျှ အနည်းဆုံး လူ ၁၀ ယောက် အသတ်ခံခဲ့ရတယ်၊ ဒါဇင်ပေါင်းများစွာ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရထားတယ်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီကနေ့ လမ်းမကြီးတွေပေါ်မှာ လူထုက ဆက်တိုက်နေဆဲ၊ “တော်လှန်ရေးသမားတွေနဲ့ လွတ်လပ်သော ပြည်သူတွေဟာ ဒီခရီးကို ဆက်လျှောက်သွားမှာပဲ၊ တော်လှန်ရေးသမားဟာ ကျည်ဆန်တွေကို မမှုပါဘူး”လို့ ဟစ်ကြွေးရင်း အံတုတိုက်ပွဲဝင်နေကြဆဲ။ “လူထုက ပိုအားကောင်းတယ်”၊ “နောက်ဆုတ်ခြင်းဟာ ရွေးလမ်းမဟုတ်” လို့ ဟစ်ကြွေးနေကြတဲ့ လူထုကို အကြမ်းဖက် ဖြိုခွဲရေး အင်အားစုတွေက မျက်ရည်ယိုဗုံးတွေသုံးပြီး ဖြိုခွဲဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်တွေ အွန်လိုင်းပေါ် ပြန့်လာတယ်။
ဒီလို အကြမ်းဖက်ရန်စလိုက်ခြင်းဟာ ဆူဒန် တော်လှန်ရေးကို မှေးစက်နေရာက လှုပ်နှိုးပေးလိုက်တယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂နှစ်တာကာလအတွင်း စိတ်ပျက်မှုတွေ၊ မျှော်လင့်ချက်ပျက်ပြားမှုတွေ ရှိခဲ့ပေမယ့် စစ်အုပ်ချုပ်ရေး ထပ်ကျော့လာရင် ဖြစ်လာမယ့် အခြေအနေတွေကို လူထုက နားလည်တယ်။ ဒီမိုကရေစီနဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာရှိရှိ ရှင်သန်နိုင်သော ဘဝကို လူထုကြီးက ပြင်းပြင်းပြပြ လိုလားနေကြဆဲဖြစ်တယ်၊ ရေကုန်ရေခမ်း တိုက်ပွဲမဝင်ဘဲ ဘာဘရစ်ဇင် အရိုင်းခေတ် နဲ့ အာဏာရှင်စနစ်ကို လက်လျှော့ပေးလိုက်ရတာမျိုး သူတို့ မလိုလားဘူး။
၂၀၁၉ တော်လှန်ရေး သောင်မတင်ရေမကျဖြစ်သွားခြင်း
၂၀၁၉ ဧပြီမှာ တော်လှန်ရေး လှိုင်းလုံးကြီးက ဆူဒန်နိုင်ငံရဲ့ အာဏာရှင် စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီး Omar al-Bashir ကို ဖြိုချပစ်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် လူထုကိုယ်တိုင် အာဏာမယူနိုင်တဲ့အခါ သူ့ဘာသာခန့်ထားတဲ့ အကူးအပြောင်းကာလ စစ်ကောင်စီ (TMC) က တော်လှန်ရေးကို သိမ်းပိုက်ဖို့ ဒီအာဏာ လေဟာနယ်ထဲ ချဉ်းနင်းဝင်ရောက်လာခဲ့တယ်။ စစ်ကောင်စီကို စစ်တပ် ထိပ်သီးတွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားခြင်း ဖြစ်တယ်။ ဒီလိုနဲ့ ဆူဒန် တော်လှန်ရေး ကျဉ်းထဲကြပ်ထဲ ရောက်ခဲ့တယ်၊ လမ်းမထက်မှာ တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ လူထုရယ်၊ သူတို့အာဏာ ပြန်အခြေခိုင်အောင် အချိန်ဆွဲထားဖို့ စေ့စပ်ရေးတွေ၊ အလိမ်အညာ ကတိကဝတ်တွေ သုံးပြီး လှည့်စားဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့ အုပ်စိုးသူ လူတန်းစားရယ်။
အရပ်သား အစိုးရတရပ် ပေါ်ထွန်းလာဖို့ စေ့စပ်ရေးတွေလုပ်နေချိန်၊ အောက်ခြေကနေ ထွက်ပေါ်လာတဲ့ လူထု လှုပ်ရှားမှု အရှိန်တက်နေချိန်မှာ SPA က မေလအတွင်း အင်အားကြီးမားလှတဲ့ အထွေထွေသပိတ်ကြီးကို ခေါ်လိုက်တယ်၊ တတိုင်းပြည်လုံးကို သွက်ချာပါဒလိုက်သွားစေခဲ့တယ်။ အစိုးရဝန်ထမ်း ၉၈% သပိတ်မှောက်ခဲ့တယ်လို့ အစီရင်ခံစာတွေမှာ ဖော်ပြတယ်။ အစိုးရထက် SPA သပိတ်ကော်မတီရဲ့ အာဏာကို လက်ခံကြောင်း အစိုးရဝန်ထမ်းတွေကိုယ်တိုင် ပြသလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ စစ်သားတွေ တော်လှန်ရေးဘက် ပူးပေါင်းပြီး အသက်ဆက်ရှင်နိုင်အောင် အသည်းအသန် ကြိုးစားနေရတဲ့ အုပ်ချုပ်ရေး စနစ်ဟောင်းတခုလုံးကို ဖြိုချပစ်ဖို့ တိုက်တွန်းချက်တခုပဲ လိုတော့တယ်။
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်၊ နောက်၂ရက်အကြာမှာ SPA က “စစ်အာဏာဖီဆန်ခြင်း - စီဒီ”ဆက်လုပ်ရေးကို ဦးစားပေးပြီး သပိတ်ကို လှန်ပေးခဲ့တယ်။ (ကျနော်တို့ဆီမှာ ‘စီဒီအမ်’ တောင့်ခံရင် စစ်ကောင်စီပြုတ်ပြီလို့ စီအာပီအိတ်ချ်၊ အန်ယူဂျီ အမှူးပြုတဲ့ လစ်ဘရယ် ဘူဇွာတွေ တဖွဖွပြောခဲ့သလိုပဲ၊ ဆူဒန် ၂၀၁၉ တော်လှန်ရေးမှာလည်း SPA က ‘စီဒီ’ ဆက်လုပ်ရေးကို ဦးစားပေးပြီး အထွေထွေသပိတ်ကို လှန်ပေးခဲ့ကြတယ်။) ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ရဲ့ စိတ်ဓာတ်ပျက်ပြားစေသော သက်ရောက်မှုကြီးကြောင့် တန်ပြန် တော်လှန်ရေးဘက်ကို အလေးသာ သွားစေခဲ့တယ်။ အဲဒီအခါ တန်ပြန်တော်လှန်ရေးကို RSF လူမျိုးစု လက်ရုံးတပ် အကြီးအကဲဖြစ်တဲ့ အင်မတန် ဖောက်ပြန်သော ဗိုလ်ချုပ် Mohamed Hamdan Dagalo (Hemeti လို့လည်း လူသိများ) က ဦးဆောင်ခဲ့တယ်။ Hemeti ရဲ့ ကွပ်ကဲမှုအောက်ကနေ RSF တပ်ဖွဲ့က ထိုင်သပိတ်တွေကို ဇွန် ၃ မှာ တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်။ Khartoum မြို့တော်မှာ အကြမ်းဖက် လှိုင်းကြီး ဖုံးလွှမ်းသွားခဲ့တယ်၊ ဆန္ဒပြပြည်သူ ၁၀၀ ကျော် အသတ်ခံခဲ့ရပြီး နောက်ထပ် ရာပေါင်းများစွာ ရက်ရက်စက်စက် နှိပ်ကွပ်ခံခဲ့ရတယ်။
ဒီရက်စက်မှုတွေဟာ လူထုကို ကြောက်ရွံ့သွားစေမယ့်အစား ရှေ့ဆက်တိုက်ဖို့ တွန်းအားပေးခဲ့တယ်။ ဇွန် ၉ မှာ အထွေထွေသပိတ်တခု ထပ်ခေါ်ဖို့ လူထုက SPA ကို ဖိအားပေးခဲ့တယ်၊ ဇွန် ၉ အထွေထွေသပိတ်ကြီးကြောင့် စစ်ကောင်စီ ပြိုကျခါနီးနေပြီ။ ဒါပေမယ့် ဒီတချီမှာလည်း စစ်ကောင်စီအပေါ် ‘စိတ်စေတနာ မှန်ကန်ကြောင်း’ ပြသတဲ့အနေနဲ့ SPA က သပိတ်ကို လှန်ပေးလိုက်ပြန်တယ်။ စစ်ကောင်စီနဲ့ စေ့စပ်ဆွေးနွေးရေး ပြန်လုပ်ပြီး နောက်ဆုံး ဇူလိုင် ၄ မှာ အာဏာခွဲဝေရေး သဘောတူညီချက် ရသွားခဲ့တယ်။ ဆူဒန်နိုင်ငံရဲ့ “ဒီမိုကရေစီ ကူးပြောင်းရေး”ကို ကြီးကြပ်ဖို့ စစ်ဖက်-အရပ်ဖက် အကူးအပြောင်းကာလ ပူးတွဲအစိုးရတရပ်ကို ထူထောင်ခဲ့တယ် အဲဒီအစိုးရဥသျှောင်က Sovereign Council ဖြစ်တယ်။ ဒီကောင်စီမှာ စစ်ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေနဲ့ တော်လှန်ရေးရဲ့ အရပ်သား ကိုယ်စားလှယ်ကြီးတွေ အချိုးကျ ပါဝင်ကြတယ်။
အဲဒီ ‘အပေးအယူ’ စီမံကိန်းကို သစ္စာဖောက်လုပ်ရပ်ပဲလို့ မှန်မှန်ကန်ကန် မြင်ခဲ့ကြတယ်၊ အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ဟောင်း တစုံလုံးကို ဖြိုချပစ်ဖို့ လူထု အင်အားကို အားမကိုးဘဲ တော်လှန်ရေးရဲ့ လူသတ်သမားတွေကို အစိုးရအဖွဲ့ထဲ ခေါ်သွင်းတဲ့အထိ သစ္စာဖောက်ခဲ့တယ်။ လက်ရှိ အာဏာသိမ်း စစ်ခေါင်းဆောင် Burhan ဟာ တကယ်တမ်းကျ သူကိုယ်တိုင် ဖျက်သိမ်းလိုက်တဲ့ Sovereign Council ရဲ့ ဥက္ကဌဖြစ်တယ်။ Burhan ဟာ ဆူဒန်လူထု သွေးနဲ့ရင်းပြီး ဖြိချခဲ့ရတဲ့ ပုပ်သိုးနေသော Bashir စစ်အာဏာရှင်စနစ်ဟောင်းရဲ့ မရှိမဖြစ် အစိတ်အပိုင်း ဖြစ်တယ်။ အဲဒီ အကူးအပြောင်းကာလ အစိုးရအဖွဲ့ထဲ ပါဝင်ဖို့ ဖိတ်ခေါ်ခံခဲ့ရတဲ့ Hemeti လည်း အတူတူပဲ။
အဲဒီဖောက်ပြန်ရေးသမားတွေနဲ့အတူတူ အစိုးရအဖွဲ့ထဲ ဝင်ပါခဲ့တဲ့ လစ်ဘရယ် SPA ခေါင်းဆောင်တွေဟာ ဒီကနေ့ ကျနော်တို့ မြင်တွေ့နေရတဲ့ အခြေအနေတွေ ပေါ်ထွန်းလာအောင် လမ်းခင်းပေးခဲ့တာပဲ။ အဆင့်တိုင်းမှာ လူထု အင်အားကို အားပြုရမယ့်အစား ဆူဒန် တော်လှန်ရေး ခေါင်းဆောင်တွေဟာ ဖောက်ပြန်ရေး အင်အားစုတွေနဲ့ အတူလက်တွဲဖို့ ဘုံတူညီချက်ကိုသာ ရှာဖွေခဲ့ကြတယ်။
ဒီအခြေခံပေါ်ကနေ ထွက်ပေါ်လာတဲ့ နောက်ဆုံး စစ်အာဏာသိမ်းပွဲကို ဘယ်သူမှ မအံ့ဩတော့ဘူး။ ဆိုးပြီးရင်း ဆိုးလာတဲ့ အကြပ်အတည်းက စစ်အာဏာသိမ်းဖို့ ပြင်ဆင်ပေးထားခဲ့တယ်။ ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါကပ် မဖြစ်ခင်ကတည်းက အင်မတန် ပြင်းထန်တဲ့ စီးပွားပျက်ကပ်ဒဏ်ကို ဆူဒန် နိုင်ငံ အလူးအလဲ ခံနေခဲ့ရတယ်။ ဆူဒန်နိုင်ငံ လူဦးရေရဲ့ ၂၃% ရှိသော လူပေါင်း ၉.၃%ဟာ လူသားချင်းစာနာမှု အကူအညီတွေ လက်ငင်း လိုအပ်နေတယ်လို့ ၂၀၂၀ ခုနှစ် အစပိုင်းမှာ ကုလသမဂ္ဂက ခန့်မှန်းထားခဲ့တယ်။ ရောဂါကပ်ဒဏ်၊ မိုးခေါင်ခြင်း ရေကြီးခြင်း သံသရာလည်နေတဲ့ ဒဏ်၊ သီးနှံဖျက် ကျိုင်းအုပ်တွေ စုပြုံကျတဲ့ဒဏ် အားလုံးပေါင်းခံလာရတဲ့ အခြေအနေမှာ လူသားချင်းစာနာမှု အကူအညီ လက်ငင်းလိုအပ်နေတဲ့ လူဦးရေ အချိုးအစားဟာ တိုးပြီးရင်း တိုးလာခဲ့တယ်။
ဆူဒန်မှာ အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၆၀ ဘီလျံ အကြွေးတင်နေတယ်၊ ဒီအကြွေးပမာဏဟာ ဆူဒန်နိုင်ငံ ဂျီဒီပီရဲ့ ၂၀၀% နဲ့ညီမျှတယ်။ အမေရိကန်က ၂၀၂၀ တနှစ်တည်းမှာတင် ဒေါ်လာ ၃၇၇ သန်း အကူအညီ ပေးခဲ့တယ်။ IMF က သုံးနှစ်အတွင်း ဆူဒန်ရဲ့ ပြည်ပ ကြွေးမြီ ဒေါ်လာ ၅၀ ဘီလျံကျော် လျှော်ပေးမယ်လို့ သဘောတူခဲ့တယ်။ အဲဒီ အရင်းရှင်နယ်ချဲ့ “အကူအညီ”ဟာ နှောင်ကြိုးတွေ ချည်တုပ်ပြီး ပေးထားတာ။ အကူးအပြောင်းကာလ အစိုးရကို အတင်းအကြပ် ခြိုးခြံချွေတာရေး လုပ်ငန်းစဉ် (ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ အမတော်ကြေး၊ ပင်စင်လစာ အစရှိတဲ့ အများပြည်သူ သာယာဝပြောရေး ကဏ္ဍတွေမှာ အစိုးရ အသုံးစရိတ်တွေ လျှော့ချ/ ဖြတ်တောက်တဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်) အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ ဖိအားပေးခဲ့တယ်။ အစိုးရက စိုက်ထုတ်ပေးတဲ့ လောင်စာဆီ အမတော်ကြေးတွေ ဖြတ်တောက်ပစ်ခဲ့တယ်။ ဒီအချက်ဟာ ၂၀၁၉ တော်လှန်ရေး ဖြစ်ပေါ်လာရခြင်းရဲ့ အဓိက အချက်တွေထဲက တချက်ဖြစ်တယ်၊ ဒါနဲ့အတူ အခြေခံ စားသောက်ကုန် အမတော်ကြေး ဖယ်ရှားပစ်လိုက်ခြင်း (အခုလည်း ဒီလို ဖယ်ရှားပစ်ဖို့ စဉ်းစားနေပြီ)၊ ငွေကြေး ဖောင်းပွမှု တဟုန်ထိုး မြင့်တက်လာခြင်းတွေ (၂၀၂၁ ဧပြီမှာ ၃၆၃.၁၀% အထိ စံချိန်တင် မြင့်တက်ခဲ့တယ်) အကုန်ပေါင်းပြီး တော်လှန်ရေး ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ခပ်တိုတိုပြောရရင် အရင်ပြဿနာအဟောင်းတွေအားလုံး ဒုံရင်းအတိုင်းပဲ ရှိသေးတယ် အကူးအပြောင်းကာလ အစိုးရအပေါ် နာကျည်းချက်တွေ တိုးပြီးရင်း တိုးလာခဲ့တယ်။
ကနဦးကတည်းက တော်လှန်ရေးရဲ့ တပ်ဦးကို တွန်းတင်ခံလိုက်ရသော ဝန်ကြီးချုပ် Hamdok လို လစ်ဘရယ်တွေဟာ အဲဒီလုပ်ရပ်တွေ (အတင်းအကြပ် ခြိုးခြံချွေတာရေး အစီအမံတွေ)ကို ဝေဖန်ဖို့ ပျက်ကွက်ခဲ့ရုံ မကဘူး၊ ဒီလုပ်ရပ်တွေအတွက် တာဝန်ယူခဲ့ကြတယ်၊ အစိုးရအဖွဲ့ထဲ ဝင်ပါပြီး ဒီလုပ်ငန်းစဉ်ကို ဦးဆောင်ဦးရွက်ပြု အကောင်အထည်ဖော်ပေးခဲ့ကြတယ်။ ဒီမိုကရေစီနည်းကျ ရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားတဲ့ အစိုးရကို အာဏာ လွှဲပေးပါမယ်ဆိုတဲ့ စစ်တပ်ရဲ့ ‘ကတိကဝတ်’နဲ့ လစ်ဘရယ် ခေါင်းဆောင်တွေ အိပ်မွေ့ချခံခဲ့ရတယ်၊ အလုပ်သမားတွေ၊ ဆင်းရဲသားတွေအပေါ် ထိုးနှက်တိုက်ခိုက်နေလည်း အသာတကြည် ခွင့်ပြုပေးခဲ့တယ်။
ဒါပေမယ့် စစ်တပ်မှာ အာဏာစွန့်လွှတ်ဖို့ ဘယ်တုန်းကမှ စိတ်ကူးမရှိခဲ့ဘူး။ ၂၀၁၉ ကတည်းက အကူးအပြောင်း ကာလ အစိုးရအဖွဲ့အတွင်း ပဋိပက္ခတွေ ဖြစ်ထွန်းလာတယ်၊ ဥပဒေပြုရေးမှာ သဘောတူညီချက်ရဖို့ ကြိုးစားလဲ အကြိမ်ကြိမ် အရေးနိမ့်ခဲ့ရတယ်။ မကြာသေးခင်က စစ်သုံးစရိတ် လျှော့ချဖို့ ကြိုးပမ်းချက်ဟာလည်း စစ်ခေါင်းဆောင်တွေဆီက ဆန့်ကျင်တုံ့ပြန်မှုကိုသာ ရရှိစေခဲ့တယ်၊ အရပ်သားခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ ပူးတွဲအစည်းဝေးမှာ စစ်ခေါင်းဆောင်တွေ မတက်တော့ဘူး။ ၂၀၁၉ တော်လှန်ရေးကို ရက်ရက်စက်စက် အကြမ်းဖက် နှိပ်ကွပ်ခဲ့ခြင်းအပေါ် စုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့ စီစဉ်ထားပေမယ့် စစ်ဖက် အရပ်ဖက် စေ့စပ်ရေးတွေက အချိန်ဆွဲထားခဲ့တယ်၊ ဒါလည်း မထူးဆန်းဘူး၊ ဒီအကြမ်းဖက်မှုတွေအတွက် တာဝန်ရှိသူတွေဟာ အဲဒီကတည်းက သမ္မတ အိမ်တော်ထဲ ထိုင်နေခဲ့တာ။
အဲဒီလို အကြပ်ရိုက်နေလို့ အကူးအပြောင်းကာလ အစိုးရက ကျင်းပပေးပါမယ်လို့ ကတိပြုထားတဲ့ အရပ်သား အစိုးရ ဖွဲ့စည်းရေး ရွေးကောက်ပွဲတွေကို ၂၀၂၃ အထိ အချိန်ရွှေ့ထားခဲ့တယ်။ ၂၀၂၀ တနှစ်လုံး အောက်ခြေအဆင့် ခုခံကာကွယ်ရေး ကော်မတီတွေက ဆန္ဒပြပွဲတွေ ဦးဆောင်လုပ်ခဲ့ကြတယ်။ စီးပွားရေး၊ နိုင်ငံရေး ပြုပြင်မှုတွေ ခပ်မြန်မြန် လုပ်ဖို့ ဒီကော်မတီတွေက အစိုးရကို ဖိအားပေးခဲ့တယ်။ ဒီနောက် စက်တင်ဘာမှာ အာဏာသိမ်းဖို့ ကြိုးပမ်းခဲ့ပေမယ့် အထမမြောက်ခဲ့ဘူး၊ အရပ်ဖက် ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ စစ်ခေါင်းဆောင်တွေ အပြန်အလှန် စွပ်စွဲခဲ့ကြတာပဲ ရှိတယ်။
စစ်တပ်က စီးပွားရေး၊ နိုင်ငံရေး အကြပ်အတည်းကို အချိန်ဆွဲထားပြီး အရပ်သား နိုင်ငံရေးသမားတွေကို လူတွေ အကြိုက်နည်းလာတဲ့အထိ စောင့်နေခဲ့မှန်း အထင်အရှားပဲ၊ ဒါမှ စစ်တပ်က ဝင်ပြီး အာဏာသိမ်းလိုက်နိုင်မှာ။ မြို့ကြီး ပြကြီးတွေရဲ့ အပြင်ဘက်မှာ စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေက လူမျိုးစု ခေါင်းဆောင် အီလစ်တွေကို မြိုးမြိုးမြက်မြက်လေး ပေးပြီး ထောက်ခံမှုရဖို့ လုံးပမ်းနေခဲ့တယ်။ အဲဒီ လူမျိုးစုခေါင်းဆောင် အီလစ်တွေဆိုတာ စစ်အာဏာရှင်ဟောင်း al-Bashir အစိုးရရဲ့ သူကောင်းပြုမှုနဲ့ ကောင်းစားလာခဲ့သူတွေ။ ခြစားနေတဲ့ ခေတ်နောက်ပြန်ဆွဲ အဲဒီပါရာဆိုက်တွေဟာ အမျိုးသမီး အခွင့်အရေး၊ ဒီမိုကရေစီ အခွင့်အရေးတွေ တောင်းဆို တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ ဆူဒန် တော်လှန်ရေးကို သူတို့အခွင့်ထူးတွေ ခြိမ်းခြောက်နေတဲ့ အရာလို့ မြင်ကြတယ်။ လူမျိုးစု အကြီးအကဲတဦးက ဆူဒန်ရဲ့ အကြီးဆုံး ပင်လယ်နီ ဆိပ်ကမ်းကို ဦးဆောင် ပိတ်ဆို့ခဲ့တယ်။ သူ့နောက်မှာ စစ်တပ် ထောက်ခံမှု ရှိတယ်၊ ဒီလို ပိတ်ဆို့လိုက်တဲ့အခါ ဆူဒန် ပြည်သူတွေ အစားအသောက်၊ လောင်စာဆီနဲ့ ငွေကြေး ရရှိဖို့ အင်မတန် ခက်ခဲသွားတယ်။
အာဏာမသိမ်းခင် ရှေ့သတင်းပတ်တွေမှာ “ဆာလောင်မွတ်သိပ်စေသော အစိုးရ”ဆီကနေ စစ်တပ်က အာဏာ သိမ်းယူဖို့ တောင်းဆိုနေတဲ့ လူအုပ်ကြီးက Khartoum မြို့တော်၊ သမ္မတ အိမ်ဝန်း အပြင်ဘက်မှာ ထိုင်သပိတ်တွေ ပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်။ ဒီဆန္ဒပြသူတွေကို စစ်တပ်က စုရုံးပေးခဲ့တယ်၊ တော်တော်များများကို စစ်တပ် ဘတ်(စ်)တွေနဲ့ ကြိုပို့ပေးခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီစစ်တပ် ထောက်ခံပွဲတွေကို အဆမတန် အင်အားပိုကြီးတဲ့ ဒီမိုကရေစီအရေး လှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ တုံ့ပြန်ခဲ့တယ်။ လူထုရဲ့ စိတ်အခြေအနေ အမှန်ကို ထုတ်ပြခဲ့တယ်။ အကြပ်ဆိုက်နေတဲ့ အကူးအပြောင်းကာလ အစိုးရကို စိတ်ပျက်ကြပေမယ့် စစ်အာဏာရှင်စနစ်ဆီ တကျော့ပြန်သွားခြင်းကို လူထုကြီး လုံးဝ သည်းခံနိုင်မှာ မဟုတ်ဘူး။
တော်လှန်သော လူထုဆီက တန်ပြန် ဆန့်ကျင်လာမှာကို ကြောက်လို့သာ ဒီအချိန်ထိ စစ်တပ်က အပြည့်အဝ အာဏာမသိမ်းဘဲ နေလာခဲ့တာ။ ဒါပေမယ့် သူတို့အတွက် အချိန်မရှိတော့မှန်း စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေ ခံစားမိလာတယ်။ ဒီမိုကရေစီအရေး ဆန္ဒပြပွဲတွေ ကြီးထွားလာတာ မြင်တွေ့နေရတဲ့အခါ ‘အခုအာဏာသိမ်းရင်သိမ်း မဟုတ်ရင် ဘယ်တော့မှ စစ်အာဏာ မတည်နိုင်တော့ဘူး’လို့ သဘောပေါက်ပြီး အခုလို ဆုံးဖြတ်လိုက်ပုံရတယ်။
‘နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအဝိုင်း’ ဆိုတဲ့အရာတွေက (ဆူဒန်မှာ အကျိုးစီးပွားတွေ ရှိနေတဲ့ အရင်းရှင်နယ်ချဲ့သမား အသီးသီးကို ဆိုလို) အခုလို အာဏာမသိမ်းခင်ကတည်းက ဘာဖြစ်တော့မယ်ဆိုတာ ကြိုသိနေခဲ့ပြီးသား။ အာဏာမသိမ်းခင် ၃ ရက်အလိုမှာ အမေရိကန် အထူး ကိုယ်စားလှယ်တယောက် ဆူဒန်ကို လာသွားတယ်၊ အရပ်သား အုပ်ချုပ်ရေးကို ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းနဲ့ ကူးပြောင်းဖို့ တိုက်တွန်းရင်း အဆင်ပြေပြေ ဖြစ်ဖို့ ကြိုးပမ်းခဲ့လည်း အရာမထင်ခဲ့ဘူး။ အာဏာသိမ်းတော့မှာမှန်း သူတို့ကိုယ်တိုင် သိနေတဲ့ စစ်အာဏာသိမ်းပွဲကို အရင်းရှင်နယ်ချဲ့တွေက ကြောင်သူတော်တွေပီပီ ရှုတ်ချကြောင်း စာလေးတွေတော့ ထုတ်ပြန်ပေးခဲ့တယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂နှစ်က ကျနော်တို့ မြင်တွေ့ခဲ့ရတဲ့ တော်လှန်ရေး လှုပ်ရှားမှုကို အားသစ်လောင်းပေးတာမျိုး သူတို့ မလိုလားဘူး။ ဒါပေမယ့် အခုဆိုရင် စစ်တပ်ကလည်း လှုပ်ရှားလာခဲ့ပြီ၊ လူထုကလည်း တုံ့ပြန်လိုက်ပြီ။
၂၀၁၉ မေလ၊ ပထမ အထွေထွေ သပိတ်ကြီး ဆင်နွှဲပြီးချိန်မှာ လူထုလက်ထဲ အာဏာ ရှိနေခဲ့တယ်ဆိုတာ ကျနော်တို့ ပြောရမယ်။ စစ်တပ်၊ စနစ်ဟောင်းရဲ့ လက်ကျန်တွေကို သူတို့အာဏာ ဆက်ထိန်းနိုင်ခွင့်ပေးခဲ့တာ SPA ရဲ့ အပေးအယူ မဟာဗျူဟာပဲ ဖြစ်တယ်။
၂၀၁၉ ဇူလိုင်မှာ ကျနော်တို့ အခုလို ရေးခဲ့တယ် -
“အကူးအပြောင်းကာလ စစ်ကောင်စီ [TMC - အကူးအပြောင်းကာလ အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ စစ်ဖက် တောင်ပံ] ဟာ အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ဟောင်းရဲ့ တိုက်ရိုက် ပေါက်ဖွားလာသူဖြစ်တယ်။ အချိုးအကွေ့တိုင်းမှာ အုပ်စိုးသူ လူတန်းစားရဲ့ အနေအထားကို ခြိမ်းခြောက်လာတယ်လို့ သူတို့မြင်ထားတဲ့ တော်လှန်သော လူထုနဲ့ သူတို့ ဘယ်တော့မှ အပေးအယူ လုပ်မှာမဟုတ်ကြောင်း သံသယဝင်စရာမလိုအောင် သက်သေပြခဲ့ပြီ။ ဂျန်ဂျဝိ(ဒ်) လူမျိုးစု တိုက်ခိုက်ရေး တပ်ဖွဲ့တွေ ဦးဆောင်ပြီး တော်လှန်ရေး ကာလတလျှောက်လုံး လူထု ကြောက်သွားအောင် အကြမ်းဖက်နေခဲ့တယ်။ အဆင့်တိုင်းမှာ သူတို့ရည်ရွယ်ချက်က လူထုလှုပ်ရှားမှု လမ်းပျောက်ပြီး ပွဲပန်းသွားအောင် အချိန်ဆွဲထားမယ်၊ ဒီလိုနည်းနဲ့ တန်ပြန် တိုက်ခိုက်ရေးတွေ စတင်နိုင်ဖို့ ဖြစ်တယ်။ အခု သဘောတူညီချက် (SPA လစ်ဘရယ် ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ စစ်တပ် ထိပ်သီးတွေကြားက အာဏာခွဲဝေရေး သဘောတူညီချက်ကို ဆိုလို) က အဲဒီနည်းလမ်းတွေကို ဆက်သုံးခြင်းတမျိုးပဲ။ ဒီသဘောတူညီချက်က စစ်ကောင်စီရဲ့ အာဏာကို ဘာမှ တို့ထိမထားဘူး၊ အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ဟောင်းဟာ နဂိုအတိုင်း ဆက်ရှိနေဆဲဖြစ်တယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီသဘောတူညီချက် အရေခြုံထားပြီး စစ်ကောင်စီက လူထု လှုပ်ရှားမှု အားချိသွားအောင် ကြိုးစားလိမ့်မယ်၊ ‘တရားဥပဒေ ပြန်လည်စိုးမိုးရေး’ အခြေအနေတွေ ဖန်တီးလိမ့်မယ် - လူထုကို စစ်အာဏာရှင်စနစ်အောက် အလုံးစုံ ခေါင်းလျှိုဝင်ခိုင်းမယ်လို့ ဆိုလိုတဲ့သဘောပဲ။” (Sudan: No toarotten compromise! Finish the revolution!)
ဒီသတိပေးစကားတွေအတိုင်း အခုလက်တွေ့ဖြစ်လာခဲ့ပြီ။ အခုကစလို့ အပေးအယူ ထပ်လုပ်ဖို့ မဖြစ်နိုင်တော့ဘူး။ SPA ရဲ့ တိုက်ပွဲခေါ်သံကို လူထုက တခဲနက် တုံ့ပြန်ခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့် ဦးတည်ချက်မရှိသော ဆန္ဒပြပွဲတွေ ဘယ်လောက်ပဲလုပ်လုပ် စစ်ခေါင်းဆောင်တွေက နောက်ပြန်လှည့်မှာ မဟုတ်ဘူး။ ၂၀၁၉ အုံကြွမှုကာလမှာ ရှင်းလင်းတဲ့ လုပ်ငန်းစဉ် မရှိခဲ့လို့ တော်လှန်ရေး အီလည်လည် ဖြစ်ခဲ့ရတယ်။
ကွန်မြူနစ်ပါတီက အထွေထွေ သပိတ်ကြီးမှောက်ကြဖို့ ဆော်ဩထားတယ်။ ဒါဟာ ရှေ့ဆက်ချီတက်ရမယ့် လမ်းပဲ။ အထွေထွေ သပိတ်ကြီး မှောက်ရမယ်၊ တခွင်တပြင်လုံး အတိုင်းအတာနဲ့ စနစ်တကျ ချိတ်ဆက် စုစည်းထားရမယ်၊ ယေဘုယျ လွှမ်းခြုံနိုင်ရမယ်။ ၂၀၁၉ လူထု အုံကြွမှုအတွင်း ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ ရပ်/ကျေး ကော်မတီတွေကို သူတို့ဘာသာ ပြန်လည်အသက်သွင်းထားကြပြီ။ စစ်အစိုးရကို အလဲထိုးပစ်ဖို့ ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေက ချိတ်ဆက်စုစည်းထားသော တော်လှန်ရေး တိုက်ပွဲရဲ့ အခြေခံ အုတ်မြစ် ဖြစ်လာရမယ်။ ရပ်/ကျေး ကော်မတီတွေ နဲ့ သပိတ်ကော်မတီတွေက အောက်ခြေ စစ်သားတွေကို တော်လှန်ရေးဘက် ပူးပေါင်းလာအောင် လှုံ့ဆော်ရမယ်၊ စစ်တပ်ကို လူတန်းစား အခြေခံ ဖြိုခွဲပစ်ရမယ်၊ Burhan နဲ့ စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေကို အဆုံးသတ် အလဲထိုးပစ်နိုင်အောင် တော်လှန်ရေးကို အားဖြည့်ထားရမယ်။
စစ်ကောင်စီက ရင်ကြားစေ့လို့ မရနိုင်တဲ့ တန်ပြန်တော်လှန်ရေး အေးဂျန့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာ အကြိမ်ကြိမ် ပြခဲ့ပြီးပြီ။ စေ့စပ်ညှိနှိုင်းလို့ မရနိုင်ဘူး၊ ဖြုတ်ချမှပဲ ရမယ်၊ ဆူဒန် လူထုကိုယ်တိုင် ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးပြီး ဖြိုချမှပဲ ပြိုကျမယ်။ စစ်အာဏာသိမ်းပွဲကို ဖယ်ရှားပစ်ပြီး စစ်အစိုးရကို အလဲထိုးပြီးတာနဲ့ စစ်မှန်သော ဒီမိုကရေစီ ထူထောင်ဖို့ တိုင်းပြု ပြည်ပြုလွှတ်တော်တရပ် ကျင်းပရမယ်။ ဖောက်ပြန်ရေးသမား စစ်ဗိုလ်တွေ လုံးဝ မပါစေရဘူး။ စစ်တပ် အကြီးအကဲတွေ ပိုင်ဆိုင်ထားသမျှ ဓနဥစ္စာတွေ ပြည်သူပိုင်သိမ်းပြီး တိုင်းပြည်ကို ပြန်လည်တည်ဆောက်ရမယ်။
ဆူဒန် လူထုအပေါ် သက်ရောက်နေသော ဆိုးဆိုးရွားရွား ပြဿနာတွေကို အရင်းရှင်စနစ်က ဖြေရှင်းမပေးနိုင်တာ အထင်အရှားပဲ။ သတ္တုချလိုက်ရင် အလုပ်သမား၊ လယ်သမားတို့ရဲ့ ဆိုရှယ်လစ် အစိုးရတရပ်ကသာ ပြည်ပ ကြွေးမြီတွေ ပယ်ဖျက်ပစ်ဖို့၊ နယ်ချဲ့စနစ်အောက်က ရုန်းထွက်ဖို့၊ တိုင်းပြည်ရဲ့ စီးပွားရေးဘဝကို ဒီမိုကရေစီ နည်းကျ စီမံခန့်ခွဲဖို့ လိုအပ်တဲ့ ခြေလှမ်းတွေ လှမ်းနိုင်စွမ်းရှိမှာ။ ဆူဒန် လူထုက အတိတ်မှာ အံ့မခန်း ရဲစွမ်း သတ္တိတွေ၊ ဇွဲနပဲတွေ ပြခဲ့ပြီးပြီ၊ အခုလည်း ဇွဲသတ္တိရှိရှိ တိုက်ပွဲဝင်ကြရဦးမယ်၊ ၂၀၁၉ တော်လှန်ရေး အစပြုခဲ့တဲ့ လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကို အဆုံးသတ်ရဦးမယ်။
Source: Sudan: revolution raises its head in response to military coup
By Joe Attard (26 October 2021)
ဆူဒန် တော်လှန်ရေးအတွက် နောက်ဆုံး သတိပေး ခေါင်းလောင်းသံ 22 Nov 2021
စစ်အာဏာသိမ်းခြင်းကို တုံ့ပြန်ဖို့ ခေါင်းထောင်ထလာတဲ့ ဆူဒန် တော်လှန်ရေ 27 Oct 2021